SomaliTalk.com » Warsaxaafadeed Ra’iisul Wasaare Cabdiweli “Maxamuud Xersi wuxuu ahaa shaqsi daacad ah oo naftiisa u huray Qaranka”
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli “Maxamuud Xersi wuxuu ahaa shaqsi daacad ah oo naftiisa u huray Qaranka”
Muqdisho, February 22,2014—–Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta ka qeybgalay aaska Xoghayihii joogtada ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Marxuum Maxamuud Xersi Cabdulle oo lagu aasay dugsiga Tababarka ciidanka Booliska ee Jeneraal Kaahiye (Ex. Iskool Bolisiya).
Aaska marxuum Maxamuud Xersi Cabdulle oo shalay ku geeriyooday weerarkii shalay ay kooxo dhagar qabayaal ahi ku soo qaadeen dhismaha madaxtooyada ayaa waxaa sidoo kale ka qeybgalay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Xukuumada Federaalka Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”, xubno ka tirsan golaha Wasiirada, xildhibaano iyo howlwadeeno ka tirsan xafiiska Ra’iisul Wasaaraha. Waxaana salaada janaasada lagula tukaday isla goobta.
“Maxamuud Xersi wuxuu ahaa shaqsi daacad ah oo naftiisa u huray Qaranka, wuxuuna ka yimid dalka dibdiisa isaga oo heysta amni iyo dhaqaale. Balse go’aankiisu wuxuu ahaa inuu ka qeyb qaato dhismaha iyo horumarinta dawladnimada Soomaaliya ” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo carabka ku adkeeyey in weerarkani aanu dib u dhac ku keeni doonin go’aanka dawladda ee ah in laga sifeeyo dalka kooxaha nabadiidka ee Shabaab, wuxuuna ku celiyay in ciidanka qalabka ay u diyaar garoobeen sidii dalka looga ciribtiri lahaa haraadiga kooxahaasi dhagar qabayaasha ah. Ee caadeystay daadinta dhiiga shacabka.